अ र्कैसंग भागेको आरोप लागेकी श्रीमती २ महिना पछि घर फर्किदा श्रीमानले झ पर्दा पर्यो यस्तो ल’फडा (भिडियो सहित) – Ap Nepal
अहिले सामाजिक सञ्जा’लमा श्रीमान श्रीमतीको विवाद भा ‘इरल हुन थालेका छन् । परिवारको विवादलाई युट्युवर बोलाउँदै सा’र्व’जनिक गर्दा धेरैलाई अप्ठेरो परेको छ । यहाँ पनि यस्तै भिडियो सा’र्वजनिक गरिएको छ । जहाँ श्रीमान श्रीमतीको वि’ वाद देख्न सकिन्छ । वुटवलका गीता गाहा र मनोज गाहाबीचको वि’वाद युट्युव मार्फत सा’र्वजनिक गरिएको हो । मनोजले आफ्नो श्रीमती अर्कै युवकसंग हिडेको आ’रो’प लगाएका छन् भने श्रीमानले अनावश्यक आ’रो’प लगाएर आफ्नो वे ‘इज् जत गरेको भन्दै दुख पोखेकी छन् ।
गीता गाहा करिब डेढ महिना देखि श्रीमानको सम्पर्कमा थिइनन् । उनी सम्पर्कमा नभएपछि मेरो श्रीमती खोजीदिनु भन्दै उनले युट्युवर बोलाएका थिए । उनले घ’ट’नाका बारेमा सार्वजनिक गरेपछि श्रीमती सम्पर्कमा आएको बताएका छन् । उनले श्रीमतीलाई केही भयो की भन्ने शं”का निवारण भएको भन्दै खुसी लागेको भएपनि श्रीमती अरुसंगै गएको थाहा पाए पछि दु’ख लागेको बताएका छन् ।
श्रीमानले अ’र्को यु’वकसंग गएको हो भन्ने कुरा प्रमाणीत गर्न उनले श्रीमानलाई चे’ ता वनी दिएकी छन् । उनले उल्टै श्रीमानलाई भिडियोमै प्र’माण सहित फे’ला पारेपछि आफु घरवाट हिडेको बताएकी छन् । उनीहरुले एक अर्कालाई आ ‘रो’ प लगाएका छन् । उनले घरको झ्याल समेत फोरेको पनि दावी गरेकी छन् । उनले अर्को महिलाका लागि आफ्नो श्रीमतीलाई हेला गरेपछि घर छोड्न वा’ध्य भएको बताएकी छन् ।
उनले श्रीमान लागेको महिलालाई आफुले सम्झाउन समेत खोजेको बताइन् । उनले युवतीसंग आफुले भिडियो समेत फे’ला पारेको बताएकी छन् । आफुले धेरै पटक सम्झाउँदा पनि तपाईको छोराले मानेनन् भनेर सासुलाई पनि भनेको बताएकी छन् । त्यती बेला सासुले किन त्यसै छोडिस् प्रहरी कार्यालय लैजानु पर्ने थियो भनेर भनेको बताएका छन् ।
Prevआजबाट नयाँ IPO खुल्दै , प्रतिकित्ता कति? कस्तो छ कम्पनीको वित्तिय प्रक्षेपण ?
Nextभाइरल हुँदै गएको “फु लबुट्टे सारी” स्वीज, रल्याण्डका गाएकले यसरी गाए (हेर्नुस भि डियो)